प्रकाशित मिति :2019-11-20 17:28:38
दुःख नदेखाउने, सधैं हाँसिरहने साबित्रीलेचाहिँ कहिल्यै दुःख भोगिनन् त ? जिज्ञासामा उनले थपिन्, “त्यस्तो त कहाँ सम्भव हुनु र । मेरो जीवन पनि राजकुमारीको लोक कथाभन्दा त कहाँ कम छ र ? कतिपय कुराहरू भने मान्छेले मरेर जाँदा सँगै लिएर जानुपर्दोरहेछ ।” यसो भनिरहँदा उनी गम्भीर त देखिइन् । तर पनि अनुहार भने भ्रममुक्त थियो ।